Uqeqesho lwe-PRINCE2 Isitifiketi soqeqesho kwiGurgaon & Delhi NCR, e-India - ITS Tech School
I-PRINCE2 I-Course Training Course & Certifications
I-PRINCE2® (iiprojethi kwiindawo ezilawulwayo), yindlela yokulawula iphrojekthi esetyenziswa ngokubanzi ehamba ngeendlela ezifunekayo zokuqhuba iphrojekthi ephumelelayo. I-PRINCE2® yindlela eguquguqukayo kwaye ijoliswe kuzo zonke iiprojekti. IPINCE2® iyinqanaba elisezantsi lokuphuhliswa kwaye lisetyenziswe ngokubanzi nguRhulumente wase-UK kwaye iyaqatshelwa ngokubanzi kwaye isetyenziswa kwicandelo labucala, e-UK nakwamanye amazwe. Iqukethe isicwangciso esilungileyo nesiqinisekisiweyo sokulawulwa kweprojekthi.
Ukuqonda ububanzi, imbono nenjongo ye-PRINCE2 indlela
Ukuqonda nokufezekisa iinkqubo ze-PRINCE2, imigaqo kunye neempendulo
Ukuqonda ukubaluleka nemigaqo yendlela ehleliweyo yolawulo lweprojekthi
Qeqesha uMphathi weProjekthi ngolwazi ukusebenzisa i-PRINCE2 kwiiprojekthi
Imibutho okanye abantu ngabanye bayibona imfuno yendlela elawulwayo yokulawula iiprojekthi. Abaphathi beprojekthi, abacebisi kunye nabasebenzi abancedisayo abafuna ukuqonda ngokubanzi yonke imiba yenkqubo yokuphila kwiprojekthi kunye namaxwebhu aphambili olawulo okumele adalwe ngexesha ngalinye kwiprojekthi.
Ulwazi oluqhelekileyo loLawulo lweProjekthi.
Ixesha loKhutshwa kweNkundla: Iintsuku ze-6
Imvelaphi kunye neenjongo
Umbutho weProjekthi ye2
Imisebenzi kunye noxanduva
Izixhobo kunye neentlobo zesicwangciso
Ulawulo lweProjekthi ye4
Ugunyaziso lwephakheji lomsebenzi
Ukusekwa kweprojekthi kunye nokunyamezela
Iimpawu zokujonga kunye nokugqamisa iingxelo
Ukusingatha iimeko ezingafaniyo
Iintlobo zoshishino kunye nomngcipheko weprojekthi
Cwangciso lo mgangatho
Ulawulo lomgangatho kunye nokuphononongwa kwekhwalithi
7 Ulawulo loTshintsho noLawulo loCwangciso
Shintsha amanqanaba okulawula
Ukuhlalutya impembelelo yoLawulo loqwalaselo
Ukuqala nokuqalisa iprojekthi
Ukulawula imida yomda
Ukulawula ukunikezelwa kwemveliso
Nceda ubhalele apha info@itstechschool.com & xhumana nathi kwi-91-9870480053 kwixabiso lekhosi kunye neendleko zokuqinisekisa, ishedyuli kunye nendawo
Imibuzo ye-75 ngephepha
Imibuzo ye-5 ukuba ivivinywa kwaye ingabalwa kwizikolo
Amanqaku e-35 adingekayo ukudlula (ngaphandle kwe-70 iyatholakala) - 50%
Abaxhasayo abasebenzi be-Gr8. Umqeqeshi une-exprinace enhle kwi-ITEM. Umgangatho wokutya ogqwesileyo. ngokubanzi kakhulu (...)
Kwakungqeqesho oluhle kunye nomqeqeshi omhle kunye nokufunda. Kwakubi (...)
Yayiseshoni yokufunda enkulu. Ndiyathemba ukuba sineseshoni ezininzi ezifana nale nxalenye yezinye iinkqubo zokuphila c (...)
Iziko layo elikhulu kunye nabasebenzi bekhontrakthi kunye ne-Infra efunekayo. Kucocwe i-ITIL isiseko kwi (...)
Ndiyenzile isiseko sam kunye ne-ITIL kwiSikolo seSikolo se-tech ngenyanga eyedlule ngokwayo. (...)
Ubungcali obuhle buboniswe ngumbutho wakho kunye nazo zonke izibonelelo ezithembisiwe (...)
Ndiya kubongoza bonke ababuza malunga neziko lakho ukuba bathathe ikhosi ye-ITIL yesiseko kwii (...)
Uqeqesho lwaluhle kakhulu. Indlela yokudibanisa yayimangalisa. Umqeqeshi wayechazwe kakuhle kwaye uthinte (...)
Kuyinto yolonwabo ngokwenene ukuba iChikanna ibe ngumfundisi wethu weSelenium. Inqaku elihle elifanelekileyo (...)
Kuzo zonke iingcali ezifuna ukufunda i-selenium kwaye zifezekiswe iCICD kwi-automation t (...)
Uqeqesho oluhle kakhulu endikulo. Umqeqeshi unezakhono ezigqithiseleyo zeJava kunye nePyth (...)
Umqeqeshi wayengumsebenzi onolwazi oluninzi, wachaza izihloko ngokubanzi kunye neenkcukacha (...)